Lipo Ab Board Post Surgery Liposuction BBL Foam na-enye bọọdụ mkpakọ afọ ime 360 ​​na ụfụfụ na-edobe bọọdụ afọ afọ mgbe Lipo Backboard gbakere.
· Size M dabara n'úkwù 27-34 sentimita;
· Size L dabara n'úkwù 35-40 sentimita;
· Ihe mejupụtara: Elu nke ihe a na-enye ịwa ahụ bbl bụ nke 75% polyamide + 25% spandex;N'ime na-agbakwunyere n'ime na 8.3 ''× 4.7'' polypropylene osisi na elu na ala n'akụkụ ya na-laminated na mkpa sponge.
· Ergonomic Design: Ihe mkpuchi ụfụfụ lipo 360 gburugburu na-agbagọ ma na-agbanwe nke ọma iji kechie afọ gị, akụkụ yana mpaghara azụ.
· Nye mkpakọ: Nke a lipo foams post ịwa ahụ 360 bụ ike zuru ezu (8.3 ''× 4.7'' nke polypropylene osisi na-agbakwunyere n'ime) na-enyere aka na flattening nke abdominal akpụkpọ mgbe liposuction, na-enye mkpakọ na inye aka ọgwụgwọ usoro.
· Belata akara na creases: eriri afọ na-achịkwa eriri afọ na-echebe akara akpụkpọ ahụ gị wee kwụsị mgbe ị na-edobe afọ dị larịị n'ihi na akwa ahụ dị nro nke na-enyere usoro mgbake gị aka.
Mbelata ọzịza na ọzịza: The lipo foam ab board post ịwa ahụ lipo mgbe ịwa ahụ gasịrị bụ ihe dị mkpa n'ịkwado ọzịza, ọnya yana site n'ịgbachita ahụ site na igbochi ịhịa aka n'ahụ na ịkwalite ndọghachi azụ anụ ahụ.
Kechie ụfụfụ Lipo
Size M dabara n'úkwù 27-34 sentimita asatọ
Ogo L dabara n'úkwù 35-40 sentimita
Na-enyere aka ịgbatị akpụkpọ afọ mgbe egbugbere ọnụ, na-enye mkpakọ na inye aka na usoro ọgwụgwọ.
Agbagọ mana ọ na-agbanwe nke ọma iji kechie afọ gị, akụkụ yana mpaghara azụ.
3 Layer Superimposed na etiti
Nke mbụ oyi akwa bụ polyester laminated polystyrene, nke abụọ oyi akwa bụ polypropylene osisi, nke atọ oyi akwa bụ elu na-agbanwe sponge.
Ụlọ ọrụ Eva
The Central EVA osisi na-enye ezu mkpakọ mgbe liposution.
2 Layers kwadoro n'akụkụ abụọ ahụ
Polyester laminated polystyrene na elu na-agbanwe ogbo na-n'elu abụọ.
Belata akara na creases
Chebe akara akpụkpọ gị ma kwụsị mgbe ị na-ejigide afọ dị larịị n'ihi na akwa ahụ dị nro nke na-enyere aka usoro mgbake gị.
Gbochie ọzịza na njide mmiri
Nyere aka belata ọzịza ma gbochie njide nke mmiri mmiri na ịkpụzi afọ dị larịị na akụkụ biputere op.
Nke gara aga: YBY 031 Lipo Foams & backboard BBL post ịwa ahụ na-enye ezigbo maka mgbake liposuction 360 kechie mkpuchi.
Osote: Ọfịs nkasi obi ebighị ebi Ụkwụ ezumike maka n'okpuru oche - Ergonomic ebe nchekwa ụfụfụ ụkwụ stool ohiri isi maka ọrụ, egwuregwu, Kọmputa, Cubicle Office na Ụlọ - Ngwa ntụ ntụ ụkwụ ụkwụ
YBY-003 Grey BBL back board-Lipo Foam Lumbar Mo...
YBY-015 BBL osisi set-Lipo ụfụfụ 3 mkpọ + BBL ba ...